Ciidamada DKMG ah oo Dagaal kula wareegay Magaalada Baladweyne – SBC
Ciidamada DKMG ah oo Dagaal kula wareegay Magaalada Baladweyne
Ka dib dagaalo saaka waaberigii ka qarxay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan islamarkaana uu dhexmarayay ciidamada DKMG ah iyo Xoogaga Xarkada Mujaahidiinta alshabaab ee lahaa gacan kuheynta halkaasi ayaa waxa ay xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan magaaladaasi in guud ahaan magaaladaasi ay gudaha u galaan ciidamada DKMG ah.
Dagaal xoogan oo dhexmarayay tan iyo saaka Aroornimadii hore ilaa Barqo nimadii maanta ayaa ay u suurto gashay Ciidamada DKMG ah iyo kuwa Dooxada Shabeele oo isgarabsanaya in ay galeen saldhiyada Galbeed ee magalada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalkii dhacay ay qeyb ku ahaayeen ciidamada Dalka Itoobiya oo la sheegay in iminka ay ku sugan yihiin duleedka Bari ee magaalada .
Inkastoo aan jirin warar intaasi dhaafsisan ayaa hadana waxaa soo baxaya in ciidamada DKMG ay ka taagroonaadeedn dagaalkii dhacay xoogaga xarakada Alshabaab iyadoona qaarkood saraakiishii dowlada la sheegay in ay goobo fagaare ah shacabka kula hadleen .
Lama oga isbedelkani cusub ee ka dhashay weerarkii DKMG ay saaka ku ekeeysay baladweyne halka uu ku dambeyn doono, waxayna tani noqoneysaa mid ka dambeysay dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo udiyaar garow dagaal oo ay maalmihii ugu dambeysay ku guda jireen ciidamada Taabacsan DKMG ah iyo kuwa Dooqada Shabeele.
waa yaabe miyaad naan sinaba u xishooneeyn ??maxaad ula jeedaan ciidamada dkmg ?? waxaan u maleeynayaa in aad soomaali tihiin waana wadankiinii oo cadaw qabsaday,waxaa idinku waajib ahaa in aad difaacdaan hadii aadnaan difaaci karin waxaa fiicneed in aad iska aamustaan,,, waxaan ka cabsanayaa qarni ka dib in caruurtiinu idin soo nacaladaan.. waryaada hadii aadnaad umadda ka xishooneeyn illaah ka xishooda oo afhayeen ibliis ha noqonina wallaahi amxaado abaal idinkagama hayso godobta aad u gasheen